कोरोना रिटर्न्स-३ : नयाँ भेरिएन्ट झनै घातक हुनसक्छ « AayoMail
2021,22 June, 11:18 am
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा ‘कोरोना रिटर्न्स २’ को प्रमुख जिम्मेवार कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट (B.१.६१७.२) नै रहेको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।
वैशाख २० देखि जेष्ठ २० सम्म संकलित ४८ जना कोरोना संक्रमितको नमूना ‘जीन सिक्वेंसिंग’ का लागि भारत पठाइएका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यी मध्ये ४७ जनामा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट भेटिएको छ। एकजनामा अल्फा भेरिएन्ट(B.१.१.७ ) भेटियो।
नेपालमा दोस्रो लहर अर्थात कोरोना रिटर्न्स-२ को जिम्मेवार यिनै अल्फा र खास गरी डेल्टा भेरिएन्ट रहेका थिए भन्नु उपयुक्त होइन, रहेका छन् भन्नु पर्ने हुन्छ। किनकि नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर मथ्थर हुँदै गइरहे पनि यो अझै खतराको बिन्दुभन्दा निकै माथि छ।
सबैभन्दा पछिल्लो दिन अर्थात असार ६ गतेकै तथ्यांकले यसको पुष्टि गर्छ। असार ६ गते नेपालमा २ हजार २९७ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यस दिन नेपालमा ४६ जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक संख्या ८ हजार ७७२ पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशमा अझै झण्डै ५४ हजार सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसमध्ये झण्डै ८ सयजना आइसियू तथा झण्डै २ सयजना भेन्टिलेटर सपोर्टमा छन्।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र नै पछिल्लो दिनको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंमा २८५ जना, ललितपुरमा ६१ जना र भक्तपुरमा ३३ जना गरी ३७९ जना नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। संक्रामक रोगका लागि यो संख्या निश्चय पनि खतराको बिन्दुभन्दा निकै उच्च हो।
दोस्रो लहरको जिम्मेवार डेल्टा भेरिएन्टमा पनि अर्को म्युटेशन भएको छ। डेल्टा प्लस अथवा ‘एवाई १’ ( B.१.६१७.२.१ ) का रूपमा यसको पहिचान गरिएको छ। यो नयाँ भेरिएन्ट बिटा भेरिएन्ट(B.१.३५१ ) र डेल्टा भेरिएन्टको परस्पर संयोजनले भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। कोरोना भाइरसको बाहिरी कवच स्पाइक प्रोटिनमा आएको परिवर्तन नै नयाँ-नयाँ भेरिएन्टको जन्म कथा हो। कोरोना भाइरसको सुरक्षा चक्र अर्थात स्पाइक प्रोटीनमा निरन्तर परिवर्तन अर्थात यसको सामर्थ्य (मानिसको एन्टिबडी तथा भ्याक्सिनले दिने सुरक्षाकाविरुद्ध) वृद्धि हुनु नै म्युटेशन हो।
डेल्टा प्लस अथवा एवाई १ भेरिएन्ट कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिनमा भएको K४१७N म्युटेशनका कारण अस्तित्वमा आएको हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिनमा ४१७ किसिमका प्रकारका परिवर्तन भएको हो डेल्टा प्लस (AY1) भेरिएन्टमा। विगतमा कोरोनाका अन्य भेरिएन्टमा K417N म्युटेशन देखा परिसकेको छ। आउटब्रेक डट इन्फोकाअनुसार अहिलेसम्म विश्वमा झण्डै १५० जनामा यस म्युटेशनको पहिचान गरिएको छ।
अमेरिकामा ४३ र यूकेमा ३९ स्याम्पलमा यसको पहिचान भएको छ। भारतमा भने गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेशमा यस म्युटेशनका आठवटा संक्रमित भेटिएका छन्। विज्ञहरुले यस भेरिएन्टलाई ‘ब्रेक थ्रू इन्फेक्सन’ हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। अर्थात यसले पहिला कोरोना संक्रमित भई निको भएका तथा भ्याक्सिन लिएका व्यक्तिलाई पनि खतरामा पार्न सक्छ।
चीनको वुहान शहरबाट सुरू भएको कोरोना भाइरसको स्पाइक प्रोटिनमा अहिलेसम्म अनेकौं म्युटेशन भइसकेका छन्। L452R,T478K, E484Q, T19R, D950N, P681R, D614G केही प्रमुख म्युटेशन हुन्। यी मध्ये D614G ले डेल्टा भेरिएन्टलाई आक्रामक बनाएको थियो।
भारत तथा नेपालमा डेल्टा भेरिएन्टले त्राहिमाम मच्चायो। अब यसमा भएको नयाँ म्युटेशन K417N लाई संभावित तेस्रो लहर ‘कोरोना रिटर्न्स-३’ का रूपमा हेरिँदै छ। K417N म्युटेशनलाई झनै ठूलो संभावित खतराका रूपमा चित्रित गरिँदै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार नेपालमा K417N का नौवटा केस देखिएका छन्। नेपालमा डेल्टा भेरिएन्टको कहर बाँकी छँदा नै डेल्टा प्लस (AY1) का संक्रमित भेटिनु थप चिन्ताजनक बनेको छ।
पहिला अनुमान गरिएको थियो कि, नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर सेप्टेम्बरतिर देखा पर्छ। भारतमा पनि यस्तै अनुमान गरिएको थियो। तर, केही दिन पहिला भारतका प्रख्यात चिकित्सक मेदान्तका नरेश त्रेहान र एम्सका रणदीप गुलेरियालगायत अन्य डाक्टरले ४-६ सातामै भारतमा कोरोनाको तेस्रो लहर देखिने चेतावनी दिएका छन्। भारतमा दोस्रो लहर डेल्टा भेरिएन्टकै ५० हजार भन्दा बढी संक्रमित आइरहेको अवस्थामा (नेपालमा २ हजार प्लस संक्रमित आइरहेको अवस्था ) ४ सातामै तेस्रो लहर देखा पर्यो भने स्थिति थप चिन्ताजनक हुने निश्चित छ।
विगत ५०-५२ दिनदेखि लकडाउनको मार खेपीरहेको नेपाल विस्तारै सहज अवस्थातिर उन्मुख हुँदै गइरहेको छ। यो साँचो कुरा हो कि, देश अनन्तकालसम्म लकडाउन खेप्न सक्दैन। कोरोनाको तेस्रो कहरको सम्भावना उत्तिकै टड्कारोरूपमा बढ्दै गइरहेको चेतावनी त स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्तिबाटै प्रष्ट छ। सरकार र यससँग सम्बन्धित निकाय निश्चय पनि किंकर्त्तव्यविमूढ अवस्थामा छन्। असार महीनामा सरकारलाई कर उठाउने दायित्व पनि छ। तर, सरकारको यो प्रयोग र प्रयास आत्मघाती न होला भन्न सकिँदैन।
यस पंक्तिकारले गत केही महिनादेखि चेतावनी दिँदै आएको छ – कोरोनाको त्रास र भय २०२४ सम्म यथावत रहन्छ। प्रत्येक २-३ महिनामा यसका नयाँ-नयाँ भेरिएन्टको प्रकोप आइरहन्छ। सरकारले कतिसम्म र कहिलेसम्म लकडाउन लाउने उपाय गर्छ? सम्पूर्ण लकडाउन कोरोनासँग जुध्ने उपाय हुँदै होइन तर, सरकार कहिले चेत्ने? अनेकौ उपाय छन् तर, सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग कसैको कुरा सुन्न नै चाहँदैन।
यो निश्चित छ AY1 अथवा डेल्टा प्लस भेरिएन्ट संक्रमित भई निको भएका (एन्टिबडी बनेका ) र कोरोना भ्याक्सिन लिएर एन्टिबडी बनेका दुबै वर्गलाई सामान्य व्यक्ति झै खतरनाक हुने सम्भावना छ। K417N म्युटेशन दक्षिण अफ्रिकी भेरिएन्ट बिटा भेरिएन्टमा भएको म्यूटेशन नै हो। यसै म्युटेशनका कारण (यसकाविरुद्ध अप्रभावी भएका कारण) नै दक्षिण अफ्रिकी सरकारले ऐस्ट्रेजेनेकाको भ्याक्सिन फिर्ता गरेको थियो। कोरोना संक्रमण भई निको भएका, भ्याक्सिन लिएका सबै महानुभावले नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरससँग पूर्णरूपले जोगिनु पर्छ। कुनै पनि किसिमको लापरबाही आफ्नैलागि घातक हुन्छ।